Uche nke B | Ihe omuma di nma na uwa ohuru
Cheregodi uzuzu anyị! The MoB blog na-eme ụfọdụ mmelite mgbe ị na-agagharị!
Nnukwu onye na -abanye
Kedu ihe bụ Super Introvert?
Nanị Ibi Ndụ
Otu & Mmekọ
Ahụike & Nlekọta Onwe
Echiche na nke mmetụta uche
Wellness & Ọrịa
Uche nke B
Ibi ndu na ihunanya dika ihe omimi di omimi na ala di omimi
Na-achọ ihe? Chọọ ihe ọ bụla wee kụrụ banye.
Nanị Ibi Ndụ Nwaanyị na Datinglụ
Mid-30s, Nwanyi, Di na Nwunye
Ihe ikpeazu m bu n’obi ime bu malitegharia blog m n’olu ozo. Ma mgbe m hụrụ aha otu isiokwu Vogue.com nke e kesara na Twitter izu ole na ole gara aga, biskit m gbara ọkụ. “Olee Otú M Si Bụrụ Onye Ikpeazụ Naanị n’ Grouptù M?” Aka, “Mid-30s na Single: Ndi M Chere kwa ogologo ka…
Ahụike Uche na nke Mmetụta Nnukwu onye na -abanye
Downbọchị ala na otu esi emeso ha
Ọ bụghị na-ekwuru. Akpọrọ m ụbọchị asị. Kedu ụbọchị dị ala? Daysbọchị ala bụ oge ndị ahụ ị ga-abanye onwe gị n'isi ihe na-enweghị isi na nzuzu. O nwere ike ịbụ na ị chefuru ihe n’ụlọ ahịa, yabụ na ị ga-anọ ọdụ n’oge oriri. Ma ọ bụ ikekwe enyi akpọghị gị mgbe ị chere na ị chọrọ ha…
Ihe Kasị Ukwuu
Ihe Kasị Ukwuu Nke Ọ Bụla # 1: GreenBeauty
N'afọ gara aga, n'ime obi mkpuchi nke COVID-19, etinyeere m karịa oge ọ bụla n'ime ihe ntanetị nke nlekọta ntutu isi. Nọdụ n'ụlọ nyere m oge ọzọ iji mee nke a, amakwaara m na ọ bụghị naanị m. Ndị enyi, ezinụlọ, na-arụkọ ọrụ, online forums – fọrọ nke nta ka ọ bụla ntutu-grower m maara nke kpebiri ka ha ji akpọchi-eto na di ntakiri…
Nkọwa & Satire
Na-eweta Blog azụ (aka Ezi afọ ọhụrụ!)
Ekele, niile, ma nwee obi ụtọ, Ezi afọ ọhụrụ! Echere m na anyị niile nwere ike ikwenye na obi adịghị anyị mma nke ukwuu ịhụ 2020 ga. Ma onye maara – ma eleghị anya ụfọdụ n'ime anyị bụ. Amaara m na anyị niile dị njikere itinye ụbọchị 365 gara aga dị anya n’azụ anyị, mana iji hụ na anyị chetara ihe mere anyị ji nwee ekele maka ntoputa nke afọ ọhụrụ,…
Uche nke B Na-Arụ Ọrụ –fọdụ Eme-Ọzọ
Aga m eme nke a ọsọ ọsọ na unyi. Dị ka a mkpokọta, anyị niile na-aga site na otu heck nke a afọ dị na 2020. N'otu n'otu, M nwere ike na-eche ihe ị na-niile na-aga site – na mmetụta, n'elu niile nke na-eme. Banyere onwe m, ọ bụla cacophony nke uche, mmetụta uche, na anụ ahụ ala coasters n'ihi na ọtụtụ…
Ahụike Uche na nke Mmetụta Nkọwa & Satire
Achọrọ m ka nnukwu anụ mmiri kwụsị
N'abalị nke abụọ n'ahịrị, ọ mere. N'oge a, m na-eguzo na kichin m na-eleta Google Home m ogologo oge m ga-agbaze anụ ọkụ na ụlọ ụlọ tupu nje bacteria amalite itolite. Oge shrill, ọha mkpu mkpu mebiri site ekpochi ihuenyo nke m ama ka ọ nọdụrụ na ndụ ụlọ, M…
Ngwurugwu Eke M Nkpu Isi (Nke Gi Nwere Ike, too)
Na na na, na na – ya mere na nke a abụghị ihe ndị kasị akpali akpali ma ọ bụ ike blog post na-abịa azụ n'ime eruba. Otú ọ dị, ọ dị m mkpa ugbu a. N'oge a mgbe m na-anọ n'ụlọ na-enyere mụ na ndị ọzọ aka, enwere m oge dị ukwuu ịtụgharị uche n'ụzọ m si ebi. Ndị enyi m na ndị ezinụlọ m…
Ahụike Uche na nke Mmetụta Nanị Ibi Ndụ
Obi Daybọchị Women'smụ nwanyị Mba Internationalwa !!!
Ọ ga-amasị m iche na Oge Ego Daylight was dị ka ndị ọzọ iji wee nwee ọmarịcha ụbọchị a-ụbọchị taa (n'agbanyeghị na anyị kwesịrị ị na-eme ya kwa ụbọchị) anyị na-eme emume ụmụ nwanyị n'ememe niile. Dị ka nwanyị, enwere m nsogbu mgbe niile banyere njirimara m - ya bụ, olee otu m ga - esi bụrụ nwanyị kacha mma m nwere ike ịbụ? Ana m anwale…
Nwaanyị na Datinglụ
Wzọ Anyị Na-eme
Kedu ka m si hụ gị n'anya? Ka m gụọ ụzọ. Elizabeth Barrett Browning m kwesịrị ịghọta n’oge gara aga na ọ bụ naanị ihe nzuzu na-eme n’elekere iri na otu nke abalị. Maka m, M na-achọ finagle a eze nwaanyị-sized bed-na-a-igbe matarasị site m n'ihu ọnụ ụzọ, dị ka m na-eche ka otu n'ime ndị enyi m na-abịa mgbe ọrụ na-enyere m…
Nlekọta onwe onye Nanị Ibi Ndụ
2020: Afọ nke mkpebi na mgbanwe
Pịa ebe a ka ị gaa ogologo maka afọ 2020 ọhụrụ m “kpebiri”! Ọ bụ mkpughe na-adọrọ mmasị ịmara nke ọma na ntorobịa gị na ị bụ onye a na-agbanweghi agbanwe, mara ihe, site na mgbe ị bụ nwata. Ọ bụrụ na ị dị ọcha dịka nwatakịrị, na-etinye nsị nke ihe egwuregwu gị mgbe ị na-egwuri egwu, ọ ga-abụrịrị na ị ga-enwe obi ụtọ na ịnọgide na-adị ọcha na…
Nnọọ n'uche nke B
Aha m bụ Brandee. Abụ m onye ode akwụkwọ, onye na-agụ akwụkwọ na-akwụghị ụgwọ, na onye na-eme ihe nkiri. Abụkwa m onye nwere mmetụta nke ukwuu, onye nwere mmetụta ọmịiko, na onye nnabata nke ụdị kachasị elu.
Blọọgụ a na-akọ akụkọ ọñụ m na mgba m nwere ịchọta nguzozi ndụ dị ka otu nwanyị Africa-American nke nwere mmasị maka imepụta ihe, ahụike uche, na nlekọta ntutu anụ ahụ, ebe m na-anọgide na-abụ eziokwu maka "introversion" m.
Bụ Super Introvert
Hair CareNlekọta onwe onye
Ayurveda na usoro ntutu m
Nwere ike 20, 2012
akụkọ ifoNkọwa & SatireNa Ide ihe
5 (Ezi) Oge Odide N’edemede Peeji 200
Nkọwa & SatireNa Ide iheNnukwu onye na -abanye
Ọdịdị nke ịbụ ndị na-ekiri ndị mmadụ
Nanị Ibi NdụNwaanyị na Datinglụ
Etu aga-esi nochiri Onwe Gị iberibe n’elu Onwe Gị
Ncheta Ogologo Oge (Archives)
Ncheta Ogologo Oge (Archives) Họrọ net Jenụwarị 2021 (2) June 2020 (2) Ike 2020 (1) Machị 2020 (2) Jenụwarị 2020 (1) Nọvemba 2019 (2) Ọktọba 2019 (4) Septemba 2019 (5) Julaị 2019 (2) June 2019 (2) Ike 2019 (3) Jenụwarị 2019 (4) Disemba 2018 (3) Nọvemba 2018 (3) Ọktọba 2018 (2) Septemba 2018 (5) Ọgọstụ 2018 (4) Julaị 2018 (3) June 2018 (2) Ike 2018 (3) Ọgọstụ 2017 (2) Ọgọstụ 2016 (1) Julaị 2016 (1) Ike 2016 (1) Eprel 2016 (1) Septemba 2015 (3) Machị 2015 (2) Ọgọstụ 2014 (1) June 2014 (1) Eprel 2014 (2) Machị 2014 (1) Jenụwarị 2014 (1) Nọvemba 2013 (2) Ọktọba 2013 (7) Febụwarị 2013 (1) Jenụwarị 2013 (1) Ọktọba 2012 (1) Septemba 2012 (7) Ọgọstụ 2012 (6) Julaị 2012 (1) June 2012 (1) Ike 2012 (3) Eprel 2012 (1) Machị 2012 (2) Febụwarị 2012 (6) Disemba 2011 (1)
“Na ide ihe” Archives
Na-achọ akwụkwọ edemede ochie na akwụkwọ metụtara akwụkwọ? Pịa oyiyi.
na-atụ ụjọ inwe obi ụtọ (4) egwu ide (5) umunwanyi di egwu di egwu (3) ayurvedic ntutu maka ndị mbido (4) ịghọ onye edemede (6) ịbụ ezigbo mmadụ (7) inwe obi ụtọ (10) mgbakọ ntutu (6) na-emetụta mmetụta uche (9) eme ihe banyere ịkpọasị (4) Ndi mmadu dika m (3) Daysbọchị ala (3) edere n'efu (7) ntutu 4c (8) Atụmatụ ntutu isi maka ntutu isi (4) ukwuu mwute introvert (5) kedu ka m ga-esi nwee obi ụtọ (5) kedu ka m ga-esi hie ụra karịa (3) Ahụrụ m ntutu m n'anya (5) Enwere m mmasị ide ihe (13) mmụọ nsọ ide (3) na-ede ihe ike (4) Achọrọ m inwe obi ụtọ (3) furu efu ịhụnanya (3) ịhụnanya asụsụ ule (3) hụrụ blog n'anya (7) uche nke b (19) Agbaghara ịhụnanya (3) ntutu nkịtị (10) ngwaahịa ntutu (3) udo nke uche (5) gbachi nkịtị (14) otu nwa nwanyi (3) sunday ụgbọala (4) nnukwu introvert (9) onye gbapuru (3) na-anwa idozi ihe niile (4) aga m agba ogologo ntutu (3) ngọngọ nke onye edemede (6) ode akwukwo ngwo ngwo (4) onye ode akwukwo gbochi (3) onye dere akwukwo mgbochi (3) ide (7) edere onwe m (9) ederede ngwa ngwa (8)
Denye aha na Mind!
Nweta ozi ọhụrụ na igbe mbata gị oge ha bipụtara na saịtị ahụ!
Soro m na Instagram!
© Copyright 2022 Uche nke B. Ikike niile echekwabara. Osisi Pin Pro | Mepụtara Site Gburugburu Gburugburu. Kwadoro site na WordPress.